China Ear Loop Disposable Face Mask - Ndi na emeputa ya - Shenzhen Zhongxinchuang Precision Circuit Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Igwe eji okpu kpuchie ntị
Ibepu earhook mask nkpuchi ahu ogwu
Ihe a na-eji mkpuchi ịsa ahụ agbadoro nke nwere ọgwụ ịsa ahụ na-etinyere akwa nke agbazekwa na akwa abụọ. Ejiri ya maka ndị ọrụ ahụike na ụlọ nyocha maka ịdị ọcha.
Ihe mkpuchi eji eme ihe na-adịghị mma maka iji ndị nkịtị, enwere ike itinye ya na ndị agadi, ụmụaka, ụmụaka, nchebe atọ , ike ọgwụgwụ nke ụgbọala mgbe ị na-eje ije, wdg.
Ihe nkpuchi eji akwara okpukpu ato kpuchie
Ihe nkpuchi ahụ nwere ike ịbụ akwa mkpuchi atọ nke mkpuchi akwa Mascara ịwa ahụ na-enweghị akwa a na-ekpuchi ọcha, bụ nke gbochiri ịba ncha, ifuru, ntutu, flu, nje, wdg. , ndị ọrụ ahụike (ahụike, eze, nọọsụ, nri, ịma mma ụlọ ọgwụ, mbọ, anụ ụlọ, wdg) na ndị ọrịa chọrọ nchebe nke iku ume.
Buyzụta ihe mkpuchi ụlọ atọ nwere ike iwepu ịwa ahụ ihe mkpuchi ahụ na ntanetị, anyị bụ ndị nrụpụta na onye na-ebunye ihe mkpuchi ihu atọ, ị na-enye mkpuchi nchebe, ihe ịwa ahụ, Masịị Igwe atọ nwere ike iwepu ịwa ahụ ihu ụwa. Ihe nkedo uzo nke ato na ewepu ahihia na aru nwere ike mee ka nzacha zuru oke nke nje ojoo> 95%.
Nkpuchi ahụike ịgwọ ọrịa
Ihe mkpuchi ahụike ahụike nwere 3D ntị ya na imewe ihe dị mfe iji mee ka iku ume gị dị mfe. Ngwurugwu na-agbanwe agbanwe siri ike dị mma iji eyi ogologo oge.
Igwe eji okpu kpuchie ntị Azụ ahịa Igwe eji okpu kpuchie ntị nke emepụtara na China site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ụlọ ọrụ a na-akpọ Zhongxinchuang. nke bụ otu n’ime ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ihe si China. Nabata ịzụta Igwe eji okpu kpuchie ntị jiri ọnụ ahịa dị mma nke nwere CE, FDA, COI, PMD Act na NIOSH. You chọrọ ndepụta ọnụahịa na nkọwapụta? Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike ịnye gị.